Dhexdhexaad-nimadu waxa ay ka timid ereyga Dhex.
Waxa uu leeyahay Ibnu-Faaris ereyga carabiga ah ee (Wasad) oo u dhigma dhex. Waxa uu ka kooban yahay saddexda xaraf ee kala ah (waaw, siin, dhaa) waa dhis sax (aan xarf cillo lahayn) wuxuu tusiyaa caddaalad iyo kala badh. Shayga ugu caddaaladda badannina waa shayga ugu dhexdhexaadsan. Wuxuu ilaahay (cazza wajalla) Quraanka inagu leeyahay:
)وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا( (1)
(Sidaas ayaannu idinka yeelnay ummad dhexdhexaad ah) taas oo macnaheedu yahay umad cadaalad ah.
Waxaana sugan in ay carabtu haddii ay ku dhawaaqaan kelmada (wasad) oo macnaheedu yahay dhexdhexaad waxay ula jeedaan: wanaag, caddaalad, kala badh, tayo, sarayn, iyo heybad sare(2).
Dhexdhexaadnimada umaddu waa ku habboonaanta iyo xaq u lahaanta ummadda islaamku ay xaq u leeyihiin cadaaladda iyo khayrka taas oo ay ugu markhaati kacayso ummadaha kale, kuna oogeyso korkooda caddeemo.
Wax kaste na waxa ugu cadaalad badan waa kala badhkiisa ama dhexdiisa, dhexdu ma ahan kaliya bartamaha u dhaxeya labo dhinac ama dhexda qeyb ahaaneed, sida iyada oo la yiraahdo hebel wuxuu dhex ka yahay deeqsinimadiisa ama hebel waa dhexdhexaaad xagga waxbarashadiisa iyada oo loola jeedo waxa u dhaxeeya wanaag iyo xumaan, haddaba fahanka noocan ahi dadka intiisu badani sidaas ayey u fahmeen ,qaab ufahankaanina waa mid dhimanoo hooseeya, waxuuna u gafay fahanka macnaha loola jeedo dhexdhexaadnimo, sidaa awgeed dhexdhexaadka waxaa looga jeedaa oo looga danleeyahay halkaan waa cadaalad, kheyr iyo waxa ugu wanaagsan.
Intaas waxaa dheer macnaha dhexdhexaadnimda in aysan kaliya aheen bartamaha u dhexeeya labo shey kaliya, balse ay tahay macno ka weyn oo ah in la baaro xaqiiqda, oo la helo lagana faa’ideysto.
Macnuhu intaas waa ka balaaran yahay oo waxuu soo aruurinayaa sifo kasta oo wanaagsan kanna kooban laba qeybood oo dhaleecaysan sida deeqsinimada ay ugu dhexeyso bakhiilnimada iyo maalka oo la daadiyo ama si xun oo xisaab la’aana loo isticmaalo, sidoo kale geesinimadu waxa ay u dhaxaysaa fulaynimada iyo isbiimaynta ama qar iska tuurid.
Qofkana waxa la amray in uu ka fogaado sifo kaste oo laga la dhaleeceeyay labada dhinacba waxay leeyihiin sifo dhaleecaysan kheyrka iyo wanaaga ayaa dhexda ku haraya.
(1) - Al-baqara 143
(2) – eeg (alwasadiya fii dowi alqur’aan al-kariim, Dr. Naasir Al-cumar (1/7)
More in this category: « Hordhaca buugga dhexdhexaadnimada islaamka Meelaha ay dhexdhexaadnimada kaga sugan tahay Qur'aanka iyo Sunnada »